Munyengetero waDhanieri wekureurura (1-19)
Makore 70 ekuva dongo (2)
Gabrieri anouya kuna Dhanieri (20-23)
Makore 70 euprofita (24-27)
Mesiya achauya papera mavhiki 69 (25)
Mesiya achaurayiwa (26)
Guta nenzvimbo tsvene zvichaparadzwa (26)
9 Mugore rekutanga raDhariyasi+ mwanakomana waAhashivheroshi, iye muMedhiya akanga agadzwa kuva mambo muumambo hwevaKadheya,+ 2 gore raakatanga kutonga, ini Dhanieri, ndakanzwisisa kubva mumabhuku* kuwanda kwemakore aizopera Jerusarema riri dongo,+ akataurwa mushoko raJehovha kumuprofita Jeremiya. Aiva makore 70.+ 3 Saka ndakatarisa kuna Jehovha Mwari wechokwadi, ndichimuteterera mumunyengetero, ndichitsanya+ ndakapfeka masaga, ndiine madota. 4 Ndakanyengetera kuna Jehovha Mwari wangu, ndikareurura, ndikati: “Haiwa Jehovha Mwari wechokwadi, Mwari mukuru neanoshamisa, anochengeta sungano yake uye anoratidza rudo rusingachinji+ kune vaya vanomuda uye vanochengeta mirayiro yake,+ 5 takatadza uye takaita zvisina kururama, takaita zvakaipa uye takapanduka;+ takatsauka pamirayiro yenyu nemitongo yenyu. 6 Hatina kuteerera vashumiri venyu, ivo vaprofita,+ avo vakataura muzita renyu kumadzimambo edu, nemachinda edu, nemadzibaba edu, nevanhu vese vemunyika yedu. 7 Imi Jehovha makarurama, asi isu tinongogara tichinyara sezvatiri kuita nhasi, isu nevarume veJudha, nevagari vemuJerusarema, nevaIsraeri vese, vaya vari pedyo nevaya vari kure, vari munyika dzese dzamakavaparadzira kwadziri nemhaka yekusatendeka kwavo.+ 8 “Jehovha, tiri kunyara nekuti takakutadzirai, isu nemadzimambo edu, nemachinda edu, nemadzitateguru edu. 9 Jehovha Mwari wedu ndiMwari ane tsitsi uye anokanganwira,+ asi isu takamupandukira.+ 10 Hatina kuteerera inzwi raJehovha Mwari wedu nekutevera mitemo yake yaakaisa pamberi pedu achishandisa vashumiri vake, ivo vaprofita.+ 11 VaIsraeri vese vakatyora Mutemo wenyu, uye vakatsauka vachirega kuteerera inzwi renyu, imi mukabva madurura patiri kutukwa kwakataurwa uye kwakanyorwa muMutemo waMozisi mushumiri waMwari wechokwadi,+ nekuti takakutadzirai. 12 Iye azadzisa mashoko ake aakataura pamusoro pedu+ nevatungamiriri vedu vaititonga, nekuunza kwaaita dambudziko guru patiri; zvakaitirwa Jerusarema+ hazvina kumbobvira zvaitika pasi pedenga. 13 Dambudziko rese iri rauya patiri+ sezvakanyorwa muMutemo waMozisi, asi hatina kutsvaga kunzwirwa nyasha naJehovha Mwari wedu kuburikidza nekusiya zvakaipa zvedu+ uye kunzwisisa kuti munozadzisa shoko renyu.* 14 “Saka Jehovha akaramba akatarisa uye akaunza dambudziko patiri, nekuti Jehovha Mwari wedu akarurama pane zvese zvaaita; asi isu hatina kuteerera inzwi rake.+ 15 “Takatadza uye takaita zvakaipa kwamuri Jehovha Mwari wedu, imi Mwari akabudisa vanhu vake munyika yeIjipiti neruoko rune simba,+ mukaita mbiri ichiripo nanhasi.+ 16 Jehovha, magara muchiita zvakarurama+ saka tinokumbirawo kuti mubvise hasha nekutsamwa kwenyu paguta renyu Jerusarema, iro gomo renyu dzvene; nekuti Jerusarema nesu vanhu venyu tiri kushorwa nevese vakatipoteredza+ nemhaka yezvivi zvedu uye nemhaka yekukanganisa kwemadzitateguru edu. 17 Zvino Mwari wedu, inzwai munyengetero wemushumiri wenyu nekuteterera kwake, munzwire nyasha nzvimbo yenyu tsvene+ yakaparadzwa,+ muchiitira zita renyu, imi Jehovha. 18 Haiwa Mwari wangu, rerekai nzeve yenyu munzwe! Svinurai muone kutambudzika kwedu nekuparadzwa kwakaitwa guta raishevedzwa nezita renyu; nekuti chiri kuita kuti tikutetererei haasi mabasa edu akarurama, asi itsitsi dzenyu huru.+ 19 Haiwa Jehovha, inzwai. Haiwa Jehovha, kanganwirai.+ Haiwa Jehovha, teererai muone zvekuita! Mwari wangu, fungai nezvezita renyu morega kunonoka, nekuti zita renyu riri pavanhu venyu nepaguta renyu.”+ 20 Pandakanga ndichiri kutaura ndichinyengetera nekureurura chivi changu nechivi chevanhu vekwangu vaIsraeri uye ndichikumbira Jehovha Mwari wangu kuti anzwire nyasha gomo dzvene raMwari wangu,+ 21 pandakanga ndichiri kutotaura ndichinyengetera, murume anonzi Gabrieri,+ wandakanga ndamboona muchiratidzo,+ akauya kwandiri ndakaparara nekuneta, panenge panguva yemupiro wemanheru. 22 Akaita kuti ndinzwisise, achiti: “Dhanieri, iye zvino ndauya kuzoita kuti uve nenjere nenzwisiso. 23 Pawatanga kuteterera, pabva pataurwa shoko, uye ini ndauya kuzokuudza nezvaro, nekuti uri munhu anokosha* chaizvo.+ Saka funga nezvenyaya yacho, unzwisise chiratidzo chacho. 24 “Pane mavhiki* 70 akasarudzirwa vanhu vako neguta rako dzvene,+ kuti kutadza kugumiswe, kuti chivi chipedzwe,+ kuti kukanganisa kuregererwe,+ kuti pave nekururama nekusingaperi,+ kuti chiratidzo neuprofita zviiswe chidhindo,*+ uye kuti Nzvimbo Tsvenetsvene izodzwe. 25 Ziva, unzwisise kuti kubvira pachataurwa shoko rekuti Jerusarema ridzorerwe+ uye rivakwezve kusvikira pachauya Mesiya*+ iye Mutungamiriri,+ pachava nemavhiki 7, uye mavhiki 62.+ Richadzokera pane zvarakanga rakaita uye richavakwazve, riine musika nemugero wemvura, asi muri munguva dzekutambudzika. 26 “Kana mavhiki acho 62 apera, Mesiya achaurayiwa,+ osara asina chaainacho.+ “Uye vanhu vemutungamiriri achauya vachaparadza guta nenzvimbo tsvene.+ Mugumo wacho uchauya kunge mafashamo. Pachange paine hondo kusvikira pakuguma; Mwari asarudza kuti pave nekuparadzwa.+ 27 “Iye achaita kuti sungano irambe ichishanda kwevhiki imwe chete achiitira vazhinji; uye pakati pevhiki yacho, achaita kuti chibayiro nemupiro zvichirega kupiwa.+ “Uye pabapiro rezvinhu zvinonyangadza pachange paine anoparadza zvinhu zvese;+ uye zvinhu zvakasarudzwa zvichadururwawo pana iye akaitwa dongo kusvikira pava nekuparadzwa.”
^ Kureva, mabhuku matsvene.
^ Kana kuti “makatendeka.”
^ Kureva, mavhiki emakore.
^ Kana kuti “Muzodziwa.”